United Airlines inopa PayPal QR makodhi senge nyowani yekubhadhara sarudzo
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » United Airlines inopa PayPal QR makodhi senge nyowani yekubhadhara sarudzo
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • Technology • kutakura • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
United Airlines inova yekutanga mutakuri wemhepo kuunza maPayPal QR makodhi senge inflight yekubhadhara sarudzo - iine kana isina Wi-Fi.
Yazvino isingabate-yemubhadharo yekupa inoita kuti vatengi vatenge zvekudya zvekunwa, zvinwiwa, uye kumwe kutenga kwekutenga pavanenge vari muchikepe nekungotarisa kodhi yeQR.
United Airlines vafambi vanogona kushandisa nyowani PayPal QR kodhi yekubhadhara sarudzo inflight - iine kana isina Wi-Fi.
Kubatana kunotanga muChicago mwedzi unotevera uye kuchaburitsa system-wide gore risati rapera.
United nePayPal nhasi vazivisa nzira nyowani yekutenga-yemahara inflight kutenga, kunyangwe munzvimbo dzisina Wi-Fi. Kutanga mwedzi unouya, vatengi veUnited pane dzakasarudzwa nendege vanogona kungoratidza muchengeti wekubhururuka iyo PayPal QR Code muPayPal app uye woishandisa kutenga zvinwiwa, zvinwiwa uye zvimwe zvekutenga zvisingatoreke paunenge uri muchikepe.
United Inova Yekutanga Ndege Kuzivisa PayPal QR Makodhi seInflight Kubhadhara Sarudzo
United Airlines Ndege yekutanga kupa PayPal QR Makodhi, uye kudyidzana uku chikamu cheUnited chiri nyore kushandisa, indasitiri-inotungamira suite yezvisingaenderane ekubhadhara maturusi. United ndiyo yekutanga ndege yekupa vatengi mune zvehupfumi makamuri sarudzo yekufanogadzirira-kutora zvekumwa uye zvinwiwa kubva kune iyo ndege yendege uye webhusaiti, uye zvakare inopa vatengi kugona kuchengetedza nyore nyore ruzivo rwekubhadhara muhomwe yedhijitari.
PayPal QR Makodhi anogona kushandiswa pane dzakasarudzwa nendege dzinobva kuChicago O 'Hare International Airport munaNovember uye gore risati rapera, ichawedzera kune dzese nendege kunetiweki rese uko kubhadhara kusingabatika kuripo.
"Yedu yekubhadhara isingabatanidzwe yekuvakira yakavakirwa pane zvakapusa uye sarudzo uye ndiyo imwe nzira yatiri kuvandudza ruzivo rwakazara rwekubhururuka United," akadaro Toby Enqvist, mukuru wevatengi United Airlines. “PayPal mubatsiri anotyisa uye tekinoroji iyi inopa vatengi vedu imwe nzira iri nyore yekutenga, kunyangwe ivo vasiri online. "Tinotarisira kuunza zvimwe zvitsva uye zvitsva sarudzo kune vatengi vedu mune ramangwana kuburikidza nekubatana kwedu nePayPal."
Kana usati watora, tora pasi iyo PayPal app uye gadza yako yaunofarira nzira yekubhadhara yeQR kodhi kubhadhara, usati wabva pagedhi.
Kuti uite inflight kutenga, Dzvanya iyo 'Bhadhara neQR kodhi' bhatani.
Wobva wadzvanya bhatani 'In-ndege Kutenga'.
Ratidza kodhi yeQR kumushandi weendege kuti atore.
Tarisa tsamba yekutendesa yeemail pakumhara.
"Tiri kufara kuve nehukama neUnited kuunza yedu nyowani isingabvumirwe QR kodhi inoshanda, tichiwedzera dzimwe nzira dzevatengi kuti vatarise nePayPal mune dzimwe nzvimbo, kunyanya munzvimbo dzisiri pamhepo kana dzakaderera nzvimbo," akadaro Frank Keller, Senior Mutevedzeri weMutungamiri Enterprise Segment Solutions uye Dhijitari Commerce kuPayPal. "Kuunza PayPal QR Codes inflight kunosimbisa kuzvipira kwedu kupa vatengi sarudzo uye kunopa nhanho nyowani yekubata-isina Mahara vatengi pavanenge vachitenga mundege, mukati mePayPal app yavanoziva uye kuvimba."
Gunyana 27, 2021 pa 07: 27
Isu tinotarisira kuunza zvakatowanda uye zvitsva sarudzo kune vatengi vedu. Ndege yaive zvakare yekutanga kupa vafambi vehupfumi sarudzo yekufanoodha masvutugadzike uye zvinwiwa kuburikidza neUnited app uye webhusaiti.